Agoosto | 2008 | WEEJIDOW
Archive for Agoosto, 2008
Xildhibaan Cabdi C/lle Siciid “ Labadii nin maanta ayey Xamar u duuleen iyagoo aan niyad fiicneyn, baarlamaankuna dharkuu ka dhigay Kacaan (Revalution) baan ku kicinay
Agoosto 29, 2008
Xildhibaan Cabdi C/lle Siciid (Jiniboqor) oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ku sugan magaalada Baydhabo, kana mid ah xildhibaanada fara ku tiriska ah ee aan la gamban fikirkooda, ayna siyaasad ahaan aad isaga soo horjeedaan madaxweynaha dowladda federaalka Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa ku tilmaamay in inta badan xildhibaanadii shalay ka qeybgalay fadhigii baarlamaanka ay daw u arkayeen in Cabdullaahi Yuusuf ay mucaaradaan, wuxuuna sheegay in ragga ka soo horjeestay siyaasada Cabdullaahi Yuusuf ay isugu jiraan raggii ay isku fikirka ahaayeen oo u arkayey in lagaga adkaaday heshiiskii lagu soo saxiixay Itoobiya & xildhibaanadii 100-ka xubnood ahaa.
“Waxaa jirta in iyada oo aan heshiiskiiba la hor keenin baarlamaanka in Isbaheysigii uu Cabdullaahi ku lahaa baarlamaanka oo u badan reer Puntland in ay wadaan qorshe ay ku riixayaan mooshinkii ay geysteen baarlamaanka, taasina waxay khilaafsan tahay heshiiskii ay soo kala saxiixdeen Nuur Cadde iyo C/llaahi, waayo mooshinkii dacwada ahaa wuu socdaa, waxaana wada raggii Cabdullaahi taasina waxey khilaafsan tahay heshiiskii dib u heshiisiinta labada ee nin waana dhaqanka Cabndullaahi ee khiyaanada iyo balan furyada ah ee uu leeyahay” ayuu yiri Jinniboqor.
Xildhibaan Cabdi Cabdulle Siciid Jiniboqor wuxuu kaloo sheegay in madaxweynaha iyo raisul wasaaraha ay maanta u dhoofeen Muqdisho, maalinta berri ahna baarlamaanka loo qeybin doono qodobada heshiiskii Itoobiya, markaa kadibna ay baarlamaanku ansixin doonaan ama diidi doonaan.
“Labadii nin (Madaxweynaha iyo raisul wasaaraha) maanta Xamar ayey aadeen iyaga oo aan niyad fiicneyn, berri baana laga hadlayaa mooshinadii labadooda laga keenay, Baarlamaankuna shalay dharkuu ka dhigay (Revalution) Kacaan baa lagu kiciyey” ayuu yiri Jiniboqo wuxuuna intaasi sii raaciyey.
“Kacdoonkii shalay waa loo dhammaa waxaa ku jiray raggii boqolka ahaa ee ka soo horjeeday Cabdullaahi iyo raggii saaxiibadiis ahaa oo ka xanaaqsanaa heshiiskii Nuur Cadde oo qabay in Cabdullaahi heshiiskaas looga adkaaday, marka saaxiibadiis baa Kacdoon ka waday”
Jiniboqor mar uu ka hadlayey hadalkii uu shalay baarlamaanka ka yiri madaxweynaha, wuxuu ku tilmaamay inuu ahaa mid uu ugu gefay xildhibaan Macalin Jiis.
“Hadalkaas waa daciifnimo uu diciifay oo uu dulqaadkii ka dhammaaday nin xildhibaan ah oo hadlay inuu yiraa dhulkaagii baa la haystaa oo uu ula jeeda degmada Walaweyn , marka siyaasad ahaana waa liidnimo Cabdullaahi ku dhacday.
»“war Macalin Jiisoow aamus, nin kaa futto xun ma leh ee gurigiisa la heeysto” C/laahi Yuusuf.
KN: “war aamusa, waxbo iiguma fadhido in aan illinkaa inta ka baxo, deetana aad war iga heshaane, war macalin Jiisow aamus, war aamus nin adiga kaa futto xun oo gurigiisa la heysto ma jirree” hadaladaasi layaabka leh waxay ahaayeen kuwii hanjabaada ahaa ee maanta baarlamaanka uu ka jeediyey C/laahi Yuusuf oo isagoo dharaar cad Puntland ku qarwaya lagu hooriyey. Waa Kuma Macalin Jiis?
Wixii uur ku jirra afbaa xadda, C/laahi Yuusuf uurkiisa waxaa ku jirra Puntland, illaa heer uu maalinkii xittaa ku qarwo, maanta isagoo raba in uu ka hadlo Soomaaliya ayuu yiri “danaha Puntland waxay ku jirtaa” intaasi markii uusii dhahaayey ayaa markaliya buuq iyo sawaxan, xildhibaanada ayaa ku hooriyey oo ku qosley C/laahi Yusuf, kadibna inta uu aad u xanaaqay ayuu yiri “war aamusa ,waxbo iiguma fadhido in aan illinkaa ka baxo, deetane aad war iga heshaane, wax idiinka futto ma jiraane” intaasi markii dhahay ayaa malaha waxa aad oga sii xanaajiyey Mudane Macalin Jiis oo indhihiisu ay qabanayeen, uguna qeeylo dheeraa, kadib wuxuu yiri “wax hooy Macalin Jiisow aamus, war heedhe aamus, wax adiga kaa futto xun oo gurigiisa la heyste ma jiraane aamus”, intaasi markuu iisii dhahay aya markale buuqa uusii karar qaatay, isagiina inta kaligiis isla hadlay sii watay hadalkiisa, una digey xildhibaanada oo sheegey in eey iyagu yihiin kuwa dowlada ay ka socon la’dahay, oo howlaheeda curyaanshey.
Haddaba waa maxay fasiraada hadalada C/laahi Yuusuf?, hadalka hore oo dabcan ka miisaan yar kan dambe, ayaa dhabtii ah hanjabaadii ugu cusleyd ee dhawqaanahan laga maqlo, waana fariin cad oo C/laahi Yuusuf xildhibaanada u dirayo haddii ay soo farogashadaan arrimihiisa in uu gacan oga shaqayn doono, wuxuu yiri “war baad iga heleysaan” warka hadda laga dhagaysan waayay oo uu filiyo in hadhoow laga dhagaysto waa maxay? Sow hadalka uu sheegayo olama jeedo gacan qaad iyo waxbaan dilayaa?. Dabcan marka afsoomaali ahaan loo eegana, kalmadu isticmaalkeeda waa cadyahay oo qofkii kugu yiraahda isagoo caraysan “war baad iga heleysaa” wuxuu ola jeedaa “waxbaan ku yeelayaa”.
Arrinta kale eek u saabsan Puntland, ma ahan arrin dad baddan ka yaabisey, laakiin dad baddan meeysan filanaynin in ninka meel fagaaro ah uu ka qiranayo, oo waliba uu ku qarwayo arrimaha Puntland, waxaa la ogaa qof hurdada ku qarwa, hadda waxaan aragnaa qof soo jeedka ku qarwaya, laakiin reer Bariga waxay ku dhahayaan odaga da’dii ayaa ka daba timid, sidaas ayuu ku hafay hadalka.
Arrinta kale eek u saabsan Macalin Jiis, horta Macalin Jiis waa nin ceynkee ah? Magaciisa dhabta ah waa Macalin Maxamuud Maxamed (Macalin Jiis), waa xildhibaan baarlamaanka ka tirsan, deegaan ahaana kazoo jeeda beelaha Xamar iyo gobolada dhexe dega, waxay isku heeb yihiin Nuur Cadde, wuxuu ka mid ahaa xildhibinadii garaacay xildhibaanada kale xiliga baarlamaanka uu fadhiyey Nairobi 2004-tii, waxaa lala xirey Muuse Suudi kadib markii ay taleefishanada aduunka kazoo muuqdeen iyagoo bakoorad ku garaacada rag kale oo markaasi ay isku hayeen qodobkii keenista ciidamada shisheeye ee dagaalka uu ka dhacay baarlamaanka dhexdiisa.
Macalin Jiis wuxuu sidoo kale ka mid ahaa ragii Xamar yimid ee diidey in ay Jowhar tagaan , waa nin can ah oo laga yaqaano doodaha baarlamaanka dhexdiisa ah, waa ninka ugu codka dheer, meel hore ayuu baarlamaanka ka fariistaa , wuxuuna waligiis kazoo horjeedey C/laahi Yuusuf, waxaa la filayaa in uu isaga yahay ninka hogaaminaya xildhibaanada wada mooshinka C/laahi Yuusuf xilka looga qaadayo.
In uu hadalkaasi yiraahdo C/laahi Yuusuf, olama jeedo Macalin Jiis oo kaliya, wuxuu ola jeedaa dhamaan beelaha uu ninkaasi kazoo jeedo, guriga la heysto ee uu sheegayo waa Xamar, waxana heysta xabashi iyo mooryaantiisa maryo calasta loo yaqaano, kan uu ku faanayo ee aan la heeysanina wa Puntland. Bal hadalkaasi miisaan, maxay kula tahay? Wuxuu meel gaaban ka joogsadey in uu yiraahdo “adigoo beeshiina dhulkeeda aan xabashi keeney, oo aan xasuuqayo, adinaga in aan kugu dari karro sow kama war heysid?”.
Culimada Ahlu Sunna Waljamaaca oo maanta Salaadii Jimcaha kadib dhowr masaajid ka jeediyay qudbado Ummada Soomaaliyed loogu farayo inay dagaalada joojiyaan, xilli lagu guda jiro curashada Bisha barake
Culimada Ahlu Sunna Waljamaaca oo maanta Salaadii Jimcaha kadib dhowr masaajid ka jeediyay qudbado Ummada Soomaaliyed loogu farayo inay dagaalada joojiyaan, xilli lagu guda jiro curashada Bisha barakeysan ee Ramadaan.
Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa maanta salaadii Jimcaha kaddib waxay ka soo jeediyeen dhowr Masaajid oo ku yaala magaalada Muqdisho khudbooyin kala duwan, kuwaasoo ay uga hadlayeen in ummadda Soomaliyeed loo baahan yahay maadaama bilaneyso bisha Ramadaan inay is cafiyaan isla markaana joojiyaan dagaalada ka soconaya qeybo ka mid ah dalka.
Imaamyada Masaajidada waxay soo jeediyeen maanta oo Jimco ah in loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo uu joogo inuu joojiyo colaadda socota isna cafiyo, maadaama la gelayo bishii barakada iyo kheyrka badneyd ee Ramadaan.
Imaamyada ayaa maanta oo Jimco ah waxay khudbadooda ku soo qaateen Axaadiith iyo aayado Qur’aan ah oo ka hadlayay cawaaqib xumada ka dhalan karta in ruux Muslim ah si micno la’aan ah loo dilo, waxayna yiraahdeen: “Waxaa mahad iska leh Ilaahey weyn oo kaliya naguna galladeystay dhammaan nicmayaasha muuqda iyo kuwa qarsoon, nicmooyinkaas oo kuwooda ugu waaweyn uu ka mid yahay Islaamka uu Eebbe nagu galladeystay, Islaamkaas oo tiirkiisa ka mid yahay Soonka, iyadoo Eebbe ugu talagalay inuu nagu siiyo darajo dheeri ah iyo inuu dhaafo dhammaan dembiyadeena, waxa aan marqaati kacayaa inuusan jirin axad xaq lagu caabudo oo aan ahayn Ilaaha xaqa ah oo nagu waajibiyay Soonka sida uu Alle ku yiri Kitaabkiisa aayadda 183-aad ee Suurat Al-Baqara” ayaa lagu yiri khudbooyinkaas.
Dadkiinow Allihiina ka baqa kuna mahadiya inuu idin soo gaarsiiyay owna idinkugu nicmeeyay bisha tan barakeysan oo ah bishii naxariista, bishii sadaqada, bishii akhrinta Qur’aanka, bishii u gargaaridda iyo u kaalmeynta fuqarada iyo masaakiinta, bishii dembi dhaafidda iyo isu samafalida, bishii la gaarayay raalli ahaanshada Alle, bishii sabarka iyo towba keenida, waa inaan ka faa’iideysanaa dhammaanteen” ayaa lagu yiri khudbooyinkaasi laga soo jeediyay salaadii Jimcaha.
Waxaa khudbooyinkaasi sidoo kale lagu yiri: “Waxaanu qireynaa in hoggaamiyaheena Aadamka oo aanu jecelnahay ahna Nabi Muxamed CSW inuu yahay Ilaahey addoonkiisa oo uu u soo diray dhammaan caalamka oo dhan ahna axadka ugu Alle cabsiga badan dhammaan inta dukata soonka ahna axadka ugu nooleynta badan habeenada Ramadaanka kuna qowlay Islaamka waxaa lagu dhisay shan Tiir oo waaweyn oo kala ah: Towxiidka, Oogidda Salaadda, Gudashada Sekeda bisha kulul ee la soomo iyo qasdida Beydka Alle”.
Imaamyada iyo Culumaa’udiinka maanta khudbooyinka ka soo jeediyay Masaajidada magaalada Muqdisho oo aan tegay qaarkood waxaa ka mid ahaa: Culumadaasi Sheekh Nuur Cumar Absuge, Sheekh C/qaadir Maxamed Soomow iyo Sheekh Muuse Cadde oo dhammaantood ummadda Soomaaliyeed ugu duceeyay inuu Ilaahey dhibka ka qaado bisha barakeysan ee Ramadaanna dadka u soo jeediyay inay is gacan qabtaan, isu gargaaraan, beecana hoos u dhigaan si raxmadda Ilaahey u soo degto.
Xoogagga Islaamiyiinta oo si taxadar leh u soo dhaweeyey hadaladii ka soo yeeray Meles
Muqdisho:-Xooggaga islaamiyiinta ayaa waxaa ay si taxadar leh u soo dhaweeyeen hadaladii ka soo yeeray Raiisul wasaaraha dalka Itoobiya Meles,Afhayeenka MMI C/raxiim Ciise Caddow ayaa ku fasiray hadalka ka soo yeeray mid muujinaya sidda ciidankiisu ay ugu fashilmeen dagaalada ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya
C/raxiim Ciise Caddow oo ah Afhayeenka dhinaca howlgalada MMI ayaa si taxa dar leh u soo dhoweeyey bixitaanka ciidamada Itoobiya ay ka baxaan dalka Soomaaliya,balse waxaa uu sheegay in ay dagaalka sii wadi doonaan ilaa inta ciidanka cadawga Itoobiya ay ka baxayaan gudaha dalka Soomaaliya
C/raxiim Ciise Caddow ayaa yiri ” ciidankaItoobiya iyagaa dalkeen si gardaro ah u soo gashay xasuuqday shacabkeena ,waa in ay ka baxaan dalkeen haddii kale dagaalku nma istaagi doono”
Xoogagga Islaamiyiinta ayaa aaminsan in hadalka ka soo yeeray Meles uu yahay mid uu dhaqaalo uga doonayo wadamada reer galbeedka ee qayb ka qaatay in Ciidanka Itoobiya inay soo galaan dalka Soomaaliya waxaan ay si gaar ah u tilmaameen wadanka Maraykanka oo tababar iyo dhaqaalaba ku taageeray ciidanka Itoobiya ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka “Xildhibaanadu xor bey u yihiin fulinta Mooshinada la soo gudbiyay”
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo ka hadlay fadhigii maanta ayaa sheegay in Xildhibaanada Baarlamaanka ay xor u yihiin fulinta mooshinada ay soo gudbiyeen.
Gudoomiyaha Baarlamaanka oo ka hadlay fadhigii maanta ayaa sheegay in loo soo gudbiyay Dacwad ka dhan ah Madaxweynaha, isla markaana Baarlamaanka uu ka doodi doono, wuxuu sidoo kale sheegay in aanu wali meesha ka bixin Mooshinkii Ra’iisul Wasaaraha isna laga soo gudbiyay.
“Wax walba sideeda ayay u socon doontaa, hada waxaa isoo gaaray dacwad ka dhan ah Madaxweynaha, waana laga doodi doono, Mooshinka ah in Xukuumada cod loo qaado, iyadana waa laga doodi doonaa”ayuu yiri Gudoomiyaha Baarlamaanka oo cod dheer ku sheegay in Xildhibaanadu ay yihiin kuwa doortay Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka, isla markaana ansixiya Xukuumada.
Inkastoo Madaxda ugu sareysa gaareen Heshiis, hadana dhaqan gelinta heshiiskan ayaa ah mid muran uu ka taagan yahay, waayo Mudanayaasha ayaa ah kuwo labo dhinac u kala safan, isla markaana kala aamisan mowqifyo fog, waxaana la ogeyn halka uu ku dambeyn doono Mooshinadan iska soo horjeeda.
Qaar kamid ah Xildhibaannada Baarlamaanka oo ka hadlayay heshiiskii Ethiopia ay dhex dhigtay Madaxda Dowladda ayaa sheegay in taasi aanay aheyn arrin quseysa Baarlamaanka maadaama sida ay sheegeen markii hore aan lagala tashan in la aado Ethiopia iyo inay dhex dhexaadiso toona hadana wixii kasoo baxay iyaga aanay u oolin.
Madxweynaha dalka Eritrea oo Dowlada Mareykanka ku eedeeyay in ay dalka Soomaaliya xilagan ka wado Xasuuq Bini’aadanimo.
Madxweynaha dalka Eritrea ayaa Dowlada Mareykanka ku eedeeyay in ay dalka Soomaaliya xilagan ka wado Xasuuq Bini’aadanimo.
Isagoo la hadalayay golaha wasiirada Dalka Eritrea Madxweynaha dalkaasi Isias Afawerki ayaa waxaa uu sheegay in dowlada Mareykanka in arimaha Dalka Soomaaliya marka loo eego Dhaqaalaha siyada iyo weliba arimaha Bulshada ay ku wadaan faragalin xoogan taasi oo xiligan loo arki karo dhibaato Xoogan oo lagu hayo Shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri Afawerki.
Madaxweyne Afawerki waxaa uu sidoo kale sheegay in ciidamada Ethiopia ay dalka Soomaaliya ka wadaan xasuuq kii ugu xumaa ee qarniga ka dhaca caalmka iyagoo taageero ka helaya Dowlada Mareykanka.
“Mareeykanka waxaa uu doonayaa in dalka Soomaaliya uu ka dhigo meel uu ka maamulo cida isaga hoos tagayeeysa isla markaana waxaa uu doonayaa in dalka Soomaaliya uu ka dhigo meel uu ka sifeeyo Dadka Islaamka ah” ayuu yiri madaxweynaha Dalka Eritrea.
Afawerki waxaa uu sheegay in ay jireen isku dayo lagu doonayay In dadka Soomaaliya lagu duleeysto isla markana la gumeesto taasi oo dadka Soomaaliyeed ay ka dhiidhiyeen oo ay dagaalo ka doorteen.
Dadka degan Xaafadaha kudhaw goobaha ay degan yihiin Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya oo codsaday in dhaq dhaqaaqa loo ogolaado bisha Barakeysan ee Ramadaanka
Dadka degan fariisimaha kudhaw Ciidamada Dowladda Itoobiya iyo kuwa Federaalka Soomaaliya ay kuleeyihiin magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in dhaq dhaqaaqyada loo ogolaado xilliyada habeenkii ah si ay u cibaadeystaan Bisha Ramadaanka.
Dadkan oo degan inta badan degmooyinka kala duwan ee Gobolka Banaadir ayaa sheegay waqti ay soo foodsaartay Bisha barakeysan ee Ramadaan ayna u baahan yihiin Ammaan iyo waqti ay uga faa’ideystaan ajirka ay leedahay bisha Ramadaanka.
Dadkan oo qaarkood degan goobihii inta badan laga barakacay kana akdhow fariisimo ay Ciidamada Itoobiya iyo dowladda Federalka ay ku degan yihiin ayaa waxa ay sheegeen in deegaanadooda aanu lasocan Karin xilliyada habeenkii sidaasi daraadeedna ay ka codsanayaa dowladda Federaalka inaysan ciidamadeeda dhibaateyn dadka aaaya Masaajidda ee tukanaya Salaadda Taraawiixda.
Sidoo kale waxaa jira degmooyin kale oo kuyaalla Gobolkan Banaadir oo aan laga barakicin lakin aanu kajirin wax dhaq dhaqaaq ah xilliyada habeenkii, waxaana kamid ah degmada Hodan iyo wadajir ee Gobolkan Banaadir.
Xaafadaha ka akdhow Laamiga dheer ee wadada Makka Almukarrama oo ay degan yihiin dad aad u fara badan ayaa iyana waxa ay shabelle u sheegeen in Ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa Soomaali ah oo ka akdhow xaafadahaasi difaacna kujira aysan dadka ugu suuragaleynin in xilliyada habeenkii ay salaada ugu soo baxaan iyaga oo codsaday in dhaq dhaqaaqooda loo ogolaado si ay uga faa’ideystaan barakada ay leedahay Bisha Ramadaan.
Bisha Ramadaan oo foodda inagu soo heysa ayaa waxaa jira degmooyin fara badan oo kuyaalla Gobolka Banaadir in meelaha qaar habeenkii uusan kajirin wax dhaq dhaqaaq ah mararka qaarna dagaalo ay ka dhacaan iyadoo sidoo kale meelaha qaar oo ay degan yihiin ciidamada dowladda KMG ah ee Soomaaliya aysan dadku kudhiiran Karin in ay wadadaasi ku dhaq dhaqaaqaan wixii ka dambeeya xilliga qoraxda ay dhacdo.
Maamulka Somaliland oo sheegay in ay gobolka Togdheer ka joojinayaan Lacagaha Shilin Soomaaliya oo siweyn halkaasi looga isticmaalo.
Maamulka Soomaaliland ayaa waxaa ay sheegeen in ay joojinayaan lacagaha shilin Soomaaliga ah ee laga isticmaalo gobolka Togdheere ee Maamulkaas.
Xukuumada soomaalilnad ayaa sheegtay in sanadka cusub ee soo aadan ay mamnuuci doonto lacagaha shilin Soomaaliga ah ee laga isticmaalo gobolka Togdheere oo ka tirsan gobolada bari ee maamulka Soomaaliland.
Wasiirka maaliyada Soomaaliland oo xalay waraysi siiyay qaar ka mid ah warbaahinta dowlada Somaliland ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la socodsiiyo shilanka Somalilandka ee gobolkaasi Togdheer,waxaana uu si wayn ugu nuux nuuxsaday in xukuumada Soomaaliland canshuurta laga qaado shacabka islamarkaana ay suuro gal aheyn in xukuumada ay canshuur ahaan u qaadato lacagaha shilin Soomaaliga ah oo laga isticmaalo inata badan gobolka Togdheer.
Magaalada Burco oo ah caasimad goboleedka Togdheere iyo deegaanada hoos taga ayaa haatan waxaa laga isticmaala lacagta shilinga Soomaaliga ee dalka Jamhuuriyada Soomaaliya,waxaana iswaydiin mudan qaabka ay suurtagal ku noqon karto in gobolka Togdheere laga mamnuuco lacagtaasi xili ay dad deegaankaasi ay si wayn ugu qanacsanyihin isticmaalida lacagtaasi shilin Soomaaliga ah.
Dhanka kale gobolada inta badan uu maamulo maamulka Soomaaliland ayaa waxaa ka hirgalay socoshada lacagta shilinka Soomaaliland taasi oo haatan ku dhalisay in maamulka Soomaaliland uu ku dhawaaqo in lacagtaasi laga socdsiiyo gobolka Togdheere ee maamulka Somaliland.
War Deg Deg ah: Baarlamaanka Soomaaliya oo markii ugu horeeysay si weyn u weeraray Dowlada Ethiopia
Baarlamaanka DKMG Soomaaliya ayaa markii ugu horeeysay si weyn u weeraray Dowlada Ethiopia taasi oo ay ku tilmaameen in ay faragalin toos ah ku heyso arimaha Siyaasada Dalka Soomaaliya.
Mudanayaasha Baarlamaanka ayaa xilgan waxaa ka dhex biloowday dood iyo kulamo ay ka yeelanayaan qaabka ay dowlada Ethiopia Dhex dhexaadinta uga sameeysay masuuliyiinta dowlada KMG Soomaaliya iyo doorkeeda ku aadan siyaasada Soomaaliya.
Muranka ku aadan Dowlada Ethiopia ee ka soo yeeray Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa uu yimid kadib markii dowlada Ethiopia ay heshiis dhex dhigtay Masuuliyiinta Dowalada Sida Ra’isul wasaaraha iyo Madaxweynaha Soomaaliya.
Iyadoo heshiis ay halkasi ku soo wada gaareen labadaasi masuul ayaa hadana waxaa jira loolan u dhexeeya labaadaasi masuul oo laga dareemayo Mudanayaasha Baarlamaanka Dhexdooda.
Mudanayaasha Baarlamaanka ee la kala safan labada masuul ayaa kawada siman dhaliisha ay u hayaan dowlada Ethiopia oo ay u arkaan in ay si toos ah u soo faragalisay arimaha Siyaasada Soomaaliya oo horay loogu eedeeyay in galaangal weyn u gali jirtay Arimahaasi.
Xidhibaan Cabdi Siciid Cabdulle (Jini Boqor) ayaa sheegay in ay tahay wax aan loo dul qaadan kari in dowlada Ethiopia ay u meeriso Masuuliyiinta Soomaalida waxa ku saabsan siyaasada dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Xildhibaan Max’ed Cusmaan Maye Ayaa dowlada Ethiopia ugu baaqay in ay ilaaliso nidaamka isla markaana aysan waxyeeleyn hanaanka Dowladnimo ee Soomaaliya,waxaana uu xildhibaanku sheegay in baarlamaanka Soomaaliya ay hada dareemeen dhibaato badadan oo ka imaaneysa dowlada Ethiopia oo ah faragalin Siyaasadeed.
Qaar ka mid ah dowlada KMG Soomaaliya ayaa qaba dhaliisha ay xildhibaanada Baarlamaanka u soo jeediyeen dowlada Ethiopia waxaana ka mid ah dadkaasi kuwo si weyn logu tirin jiray in ay aad u taageri jirtay hanaanka Dowlada Ethiopia ee gudaha Dalka Soomaaliya.
Dadkaasi ayaa waxaa ka mid ah Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Max’ed Dheere oo ciidamada Ethiopia ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ku eedeeyay in ay ku dhaqmayaan wax ka baxsan arimaha Bini’aadanimada.
Arintani ayaa waxaa ay muujineeysaa sida ay u sii kala tagayaan labada dowladood ee Ethiopia iyo Soomaaliya oo markii hore saaxiib ahaa isla markaana sheegi jiray in ay leeyihiin hal cadaw oo ay u arkayeen xoogaga ka soo hor jeeda.
Dad badan ayaa isweydiinaya waxa ay ku danbeeyn doonto qilaafka u dhexeeya dowlada KMG Soomaaliya iyo Dowlada Ethiopia oo inta badan gobolada Dalka Looga Awood Roonaaday kadib dagaalo ay la galeen xoogaga ka soo hor jeeda.
Masjidka Sheekh Cali Suufi oo muddo kudhaw sanad u xirnaa dagaaladii dhacayay oo maanta dib loo furay.
Masjidka Sh.Cali Suufi oo kudhawaad sanad u xirnaa Dagaaladii Muqdisho ka dhacayay awgii ayaa maanta dib loo furay iyadoo salaaddii Jimcahana lagu tukaday.
Kudhawaad 200-qof ayaa maanta si jameeco ahaan ugu tukatay Masjidka weyn ee Sheekh Cali Suufi oo maamulka masaajidkaasi ay sheegeen in maanta iyo wixii ka dambeeya uu Masaajidka furan yahay ayna ku tukan karaan dhammaan dadka degan degmada Hodan ee Gobolkan Banaadir iyo nawaaxiga degmadaasi.
Macallin Maxamed Aadan Hiiraale oo kamid ah Mashaa’ikhda Masaajidka Sheekh Cali Suufi ayaa Idaacadda Shabelle u sheegay in muddo 11-bilood kadib uu Maanta Allaah u suurtageliyay in Masaajidka Maanta Jameeco ay ku tukadaan.
Waxa uu intaasi ku daray Macallin Maxamed in Bulshada ay ugu baaqayaan ka qeybqaadashada Afuri walaalkaaga Muslimka ah ee Baahan ee kasoconaya Masaajidka Sheekh Cali Suufi.
Mid kamid ah Jameecadii Masjidkaasi maanta ku tukatay ayaa sheegay in uu si aad ah ugu faraxsan yahay dib u furista Masaajidkaasi uuna ugu baaqayo Shacabka in wixii ay keeni karaan Masaajidka ay keenaan isla markaana loogu afuriyo walaalahooda sooman ee aan awoodin ama heli Karin wax ay ku afuraan.
Furitaanka Masaajidka Sheekh Cali Suufi ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli muddo 11-bilood ah oo masjidkaasi uu u xirnaa Dagaaladii ka dhacay gudaha Magaalada Muqdisho kuwaasi oo sababay in inbadan oo kamid ah xaafadaha Magaalada Muqdisho iyo Masaajidda kuyaalla in laga kala cararo.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Agoosto, 2008.